काठमाडौँ । गत साउनमा गएको बाढीले ६० अर्ब ७१ करोड ६६ लाख क्षति भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
प्रभावित क्षेत्रको पुनःउत्थानका लागि करिब ७३ अर्ब २४ करोड ४८ लाख लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले आगामी ३ वर्षमा तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालका लागि पुनःस्थापना रणनीति अवलम्बन गरिने बताउनुभयो । जोखिमलाई सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक रुपरेखाको प्रस्तावसहित प्रतिवेदन आफूले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लले बताउनुभयो ।
प्रतिवेदनमा साउन २७ देखि ३० गतेसम्म गएको बाढी र त्यसबाट भएको क्षतिलाई मात्र समेटिएको छ । बाढीबाट देशभरका ३५ जिल्ला प्रभावित र १८ जिल्ला अत्यधिक प्रभावित भएका थिए ।